निखिलको ‘कमिटमेन्ट’ पूरा गर्न बलिउडबाट को-को आए ? « Ramailo छ
निखिलको ‘कमिटमेन्ट’ पूरा गर्न बलिउडबाट को-को आए ?
समय : 7:30 am
निखिल उप्रेतीको बिग बजेट प्रोजेक्ट ‘कमिटमेन्ट’ को मंगलबार देखि छायाँकन सुरु गरिएको छ । निखिल आफ्नै निर्माण तथा निर्देशन रहेको फिल्मको ललितपुरस्थित च्यासलदेखि आइटम डान्सबाट सुटिङ सुरु भएको हो । नेपाल, अमेरिका र स्विजरल्याण्डमा छायाँकन हुने फिल्मको लगानी मात्रै तीन करोड लाग्ने अनुमान छ । फिल्म नेपाली र हिन्दी गरी दुई भाषामा डव हुनेछ ।
निखिलको फिल्म ‘कमिटमेन्ट’ मा केही भारतिय कलाकारहरुले पनि अभिनय गर्दैछन् । बलिउडमा भिलेनको रुपमा चिनिएका गोपाल वेदी ‘रञ्जित’ नेपाल आएका उनी चार दिन बस्नेछन् । यस्तै निखिलको फिल्ममा बलिउडकै नान्सीले आइटम पस्किनेछिन् । उनी पनि नेपाल छिन् । फिल्ममा रञ्जित र नान्सीसँगै यजी शिंदे, अली जफर लगायतको पनि अभिनय रहने बताइएको छ ।
वितरक गोपालकाजी कायस्थले भारत र नेपालमा एकसाथ ‘कमिटमेन्ट’ रिलिज हुने बताए । ‘यो फिल्मले भारतबाटै लगानी उठाउँछ’ उनले भने । साठ्ठी घण्टा भित्र पुरा गर्नु पर्ने प्रतिवद्धता भित्र फिल्मको कथा घुम्नेछ ।